Mayur Times || मयूर टाइम्स || Authentic news from Nepal, Business Politics Society Art and many more ... » काठमाडौँबाट गाउँ आउने मान्छेले कोरोना नै लिएर आउँछ भन्ने एक प्रकारको भ्रम गाउँका मान्छेमा रहेछ
काठमाडौँबाट गाउँ आउने मान्छेले कोरोना नै लिएर आउँछ भन्ने एक प्रकारको भ्रम गाउँका मान्छेमा रहेछ
२०७७ भदौ १२ गते शुक्रबार ०५:१८
कोरोना भाइरसको कारणले मजदुर, किसान लगायतका सामान्य निम्न वर्गीय मानिसहरूको जीवनस्तरलाई निकै प्रभाव पारिरहेको छ । लामो समयदेखि गाडी लाइनमा लागिरहनुभएका कृष्णप्रसाद गुरागार्इँ लिएको एक अन्तर्वाताः कृष्णप्रसादजी यहाँलाई मयुर...
कोरोना भाइरसको कारणले मजदुर, किसान लगायतका सामान्य निम्न वर्गीय मानिसहरूको जीवनस्तरलाई निकै प्रभाव पारिरहेको छ । लामो समयदेखि गाडी लाइनमा लागिरहनुभएका कृष्णप्रसाद गुरागार्इँ लिएको एक अन्तर्वाताः
कृष्णप्रसादजी यहाँलाई मयुर टाइम्समा स्वागत छ ?
हस धेरैधेरे धन्यवाद
के गरेर बस्नुभएको छ ?
लक डाउन हुनुभन्दा अगाडि म हेलम्बु यतायातको रुटमा काम गर्थेँ । आम्दानी पनि राम्रै रहेको थियो । सहज रुपमा जीवनयापन चल्थ्यो । तर अहिले लक डाउन पछि म घरमा आएर बसेको छु । जीवनशैली वाक्क लाग्दोे छ । घरमै बस्ने खेती किसानीको काम गर्ने खास प्रगति केही पनि छैन ।
तपाइँ घर चाहिँ कहिले फर्कनुभयो ?
चैत्रको ११ गतेबाट लकडाउन भयो । त्यो बेला म काठमाडाैँमा थिएँ । त्यहाँ बसिरहन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । मान्छेले सबैभन्दा दुखको समयमा सम्झने भनेको आफ्नो घर नै रहेछ । मलाई पनि घरको अन्तयन्तै सम्झना भयो । त्यसकारण म काठमाडौँबाट हिँड्दै घर आए ।
काठमाडौँबाट हिँडेको कति दिनमा घर आइपुग्नुभयो ?
म काठमाडौँबाट हिँडेको एकदिनमा नै घर आइपुगेँ । त्यो बेलामा नेपालमा कोरोनाको त्रास एकदम बढेको थियो । काठमाडौँबाट गाउँ आउने मान्छेले कोरोना नै लिएर आउँछ भन्ने एक प्रकारको भ्रम गाउँका मान्छेमा रहेछ । मेरो गाउँमा प्रवेश गर्ने सबै ठाउँको नाका बन्द गरिएको थियो । म ठुलो प्रयासले जेनतेन घरमा आइपुगेँ । घरमा पुगेपछि पनि मलाई नराम्रो व्यवहार गरियो । म चौध दिनसम्म कटेराको चोटमा एक्लै बसेँ । त्यतिबेला यो समाजको ठुलाठालु मानिने मान्छेहरुसँग मलाई अत्यन्तै चित दुख्थ्यो ।
अबको योजना के छ हजुरकाे ?
मैले धेरै लामो समय गाडीको क्षेत्रमा बिताएँ । यस क्षेत्रमा मैले निकै सम्भावनाहरु देखेको थिएँ । जब कोरोना भाइरस विश्वमा देखा पर्यो । तब मलाई संसारमा किसानभन्दा ठुलो अरु कोही पनि हुँदैन । त्यसकारण म अब किसानी तर्फ लाग्छु भन्ने मेरो विचारधारा रहेको छ ।
प्रकाशित मिति १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०५:१८
बलिउड गायिका नेहा कक्कर आज विवाह बन्धनमा बाँधिइन्
२०७७ कार्तिक ९ गते अाईतबार ०७:५२
एक खेल अगावै अष्ट्रेलियाले गुमायो टी – ट्वान्टी सिरिज
२०७७ भदौ २२ गते सोमबार ०७:३७
सरकारी जागिर छाेडेर ट्याक्सी चलाउने युवाकाे कथा भाग १
२०७७ भदौ १४ गते अाईतबार ०६:२१
सरकारी जागिर छाेडेर, ट्याक्सी चालक बनेका युवाकाे कथा – भाग २
२०७७ भदौ १४ गते अाईतबार ०५:५९